Naya Post Nepal | एमालेलाई लाग्यो ठूलो दशा प्रचार-प्रसारमा हिँडेको जी’प दु’र्घटना”
एमालेलाई लाग्यो ठूलो दशा प्रचार-प्रसारमा हिँडेको जी’प दु’र्घटना”
दार्चुला। दार्चुलामा एमालेको प्रचारमा प्रयोग गरिएको जीप दु’र्घ टना भएको छ। शनिबार राति दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालि का-१ मेलखे तमा म १ ज २३९ नम्बरको जीप दु’र्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार एमालेको प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरिएको उक्त जीप सडकबाट २५ मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप मालिकार्जुन-७ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रसिंह धामीको रहेको प्रहरीले बताएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस – निर्वाचन चिह्न कसरी तय हुन्छ? निर्वाचन आयोगका मुख्य कानुनी सल्ला हकार गुरुप्रसाद वाग्लेले स्थानी य तह निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने जानकारी दिए। “यसका लागि सबै व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा तय गरिएको छ। त्यसैअनुसार आयोगले चिह्न तय गर्ने हो,“ वाग्लेले भने।
निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ।नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकता न्त्रिक समाजवादी र एकीकृत समाज वादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउँछन्।
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर पछिल्लो संसदीय निर्वा चनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिह्न पाउँछन्।
उनीहरूको निर्वाचन चिह्नको क्रम पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको सङ्ख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार विवेकशील साझा, राप्रपा,
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपासहित यस्ता दलहरूको सङ्ख्या २३ छ। गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि भाग नलिएका दलहरूले पनि आफ्नो चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।
ती दलहरूले पेस गरेको सङ्गठनात्मक विवरणका आधा रमा सङ्गठन रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार सीके राउतको जनमत पार्टी र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसहित त्यस्ता दलहरूको सङ्ख्या ४० छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारले के चिह्न पाउँछन्? यसबाहेकका स्वतन्त्र वा बागी उम्मेदवारहरू भने आयोगले तय गरेका विभिन्न ४० वटा नमुनामध्येबाट निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूले रोजेकै चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ।
तर दुई वा त्यसभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले एउटै चिह्न रोजेको अवस्थामा भने आयोगले उनीहरूको नामको सुरुको अक्षरका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने नियम छ। आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म निर्वाचन चिह्न तय गरेको छ।
२०७९ बैशाख १८, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 11914 Views